Isimahla sabalandeli be-instagram ngaphandle kokuqinisekiswa komntu | Olona tutorial lubalaseleyo kwiiGerman | IWebes.com
Ikhaya / Blog / Umxhasi we-instagram wasimahla ngaphandle kokuqinisekiswa komntu
Abalandeli be-Instagram basimahla kunye nabalandeli be-Instagram Generator
Sisondele esiphelweni sowama-2017 kwaye wonke umntu olapha ngaphandle usafuna ukuluma i-Instagram. Ngokungathandabuzekiyo yeyona nzuzo yeyona ndawo inomdla kwezentlalo apha. Ke, kufanelekile kuye nabani na ofuna ukudala ukulumkisa uphawu, elilelabo ishishini, ukukhulisa ulwazi malunga nesizathu, okanye ukwenza abahlobo abaninzi abakwi-Intanethi. Ngokucacileyo, ezi inokuba ziziindaba zakudala kubuninzi babantu abalapha. Ewe, ungasiphikisi ngenxa yokuba ngoku siza kuyeka intetho yethu kwaye sifike inyama yento kwangoko. Njengombono wesihloko, silapha ekwabelaneni ezinye iimfihlo zorhwebo khulula Abalandeli be-Instagram hashi. Ngokusisiseko, siza kukuxelela ungayifumana njani abalandeli be-Instagram yasimahla. Ngoku, sinalo lonke ingqalelo kwihlabathi. Akunjalo? Ewe, sonwabile ukufumana ingqwalaselo yakho, kwaye sizimisele ukubuyisa ububele ngokusebenzisa abalandeli bethu be-Instagram basimahla abatyhilayo. Izandi ezifana nesivumelwano esifanelekileyo, akunjalo? Ke, masiqhubeke!
Kutheni ufumana abalandeli be-Instagram basimahla?
Ukuqala, siya kukunika i-lip-service yesizathu sokuba ufanele ukuya kubalandeli be-Instagram yasimahla ngokuchaseneyo nababhatelweyo. Esi sihloko sifanelekile kwingxoxo-mini kuba ngexesha lophando lwethu sifumene ukuba abantu abaninzi bathenga abalandeli be-Instagram ukuze bazisindise kuyo yonke i-legwork efunekayo ekufumaneni abalandeli bendalo. Ngokuthetha inyani, zininzi izinto ebezingalindelekanga ezinokwenzeka ukuba uthatha indlela elula. Kuqala, abalandeli abahlawulwayo banokuthatha ixesha lokuhlawula kwiwallet yakho. Okubi kakhulu, uninzi lwabanikezeli beenkonzo ze-Instagram bazisa abalandeli bobuxoki. Ke ngoko, uya kufumana ngokuqinisekileyo ukubandakanyeka komsebenzisi kubasebenzisi. Ke, yeyiphi eyona nqaku yokufumana abalandeli abaninzi ngaphandle kokuzibandakanya? Khumbula, ukuba nokufaka iilori ezininzi zabalandeli akuyona yonke into. Ngokuthetha inyani, ngalo lonke ixesha uthenga abalandeli ababuxoki, uvele uzenzele umgodi wemali ngokwakho. Kwicala eligqithisileyo, ubeka emngciphekweni wokuba i-akhawunti yakho ithintelwe. Uyakholelwa okanye hayi, akufanelanga nokuba uphakame uye kwicala elingalunganga kwebhedi ukutsala nayiphi na kwezi zinto zenzakalisayo ze-Instagram ebomini bakho.
Abalandeli be-Instagram basimahla baQhawula ii-Perks
Abalandeli be-Instagram yasimahla banokuthatha ixesha elide ukufezekisa, kodwa bafanele iziqhamo zomsebenzi. Ewe kunjalo, ungabanjwa yinto yokulungiselela ukuba ungafumana amashumi kunye nezigidi zabalandeli basimahla ubusuku bonke. Ngaphandle kokuba uyiJustin Bieber okanye iParis Hilton, yiba nomonde. Ngomonde omncinci, inkalipho, kwaye ulumkile Abalandeli be-Instagram hashi, unokufumana amakhulu kunye namawaka abalandeli abalandeli ngexesha. Kwaye kwakhona, uya kufumana ukonwabela zonke ii-perks ezinxulumene nabalandeli basimahla. Ngokucacileyo, kuba kusimahla, awuyi kuba nomzuzwana wokuthula kweakhawunti yakho yebhanki. Kuza imvula okanye kukhanye; iakhawunti yakho iya kukhuseleka kuba awuzokwabelana nabanye ngeenkcukacha zakho nabani na ukuze ufumane abalandeli. Kwakhona iiakhawunti ezinabalandeli bendalo zihlala ngaphakathi kwe-Instagram radar. Ke, akukho bungozi bokubekwa kwiakhawunti ngenxa yemisebenzi engagunyaziswanga. Ngcono nangoku, zonke izithuba zakho ziyakonwabela ukubandakanyeka komsebenzisi, okuyinto elungileyo uphawu lwakho, iwebhusayithi, ishishini, okanye ukuthandwa nje kwi-intanethi. Ngokusisiseko, awuyi kuba nento yokulahleka kunye neninzi yokufumana ngokuthatha indlela yamahhala yabalandeli be-Instagram.
Indlela eya kubalandeli be-Instagram abaHluphekileyo
Ukuba besingutitshala weklasi yakho, siya kukuxelela ukuba uthumele imifanekiso emihle rhoqo kwaye ulinde iprofayile yakho ye-Instagram ukuba ihlinzwe. Ngokufanelekileyo, le ntshukumo ayinokwanela kwihlabathi lanamhlanje elisebenzayo. Konke oku bekuya kuba kulungile kwisigaba sedayinaso. Nangona kunjalo, asinguye utitshala wakho weklasi yakudala oneziglasi ezithi kuwe mabalinde ngonaphakade ukuze bafumane abalandeli ngokwendalo. Kwaye, silindele ukuba uhambe ngezikhonkwane kunye neenaliti zokufumana abalandeli be-Instagram mahala. Kukho indlela yokufumana inani elibalulekileyo labalandeli be-Instagram ngendlela engahambelaniyo. Ngaba uyakholelwa okanye hayi, abalandeli bethu be-Instagram batyhila ukuba bahlolwe indlela ngabantu abaninzi phaya. Ke ngoko, asikhathali ukuba sabelana ngayo ngamashumi nangamawaka abantu abafunda lo msebenzi. Njengoko besitsho, "Ukwabelana kuyakhathala." Siyavuya kakhulu ukuba sisithunywa sakho ngeendaba ezilungileyo Abalandeli be-Instagram bamahhala akukho vavanyo uqhekezo.
Free Abalandeli beJenerali Generator
Yintoni esiyithandayo malunga neefreezer zabalandeli be-Instagram ukuba abayi kuyidla i-wallet yakho. Ewe kunjalo, kukho abavelisi bobuxoki abazama ukutsiba iakhawunti yakho kwaye bakwenzakalise ngakumbi. Kodwa, ezilungileyo zisebenza njengomlingo. Ukuphelisa okungcono kwi-junk, hlala kude nabavelisi be-Instagram abaza ngendleko okanye bafuna ulwazi lwakho. Ezilungileyo phaya aziyi kucela iipassword zakho ze-Instagram, ikhadi letyala, okanye naluphi na olunye ulwazi olucelwe ukuba luyimfihlo ngendalo. Ngethamsanqa, zimbalwa ezilungileyo Abalandeli be-Instagram basimahla abakho kuvavanyo abavelisi bangaphandle abanokukunceda ukuba utshintshe iigiya ze-Instagram ezilungileyo ngokukunceda ufumane abalandeli abangenamda ngaphandle kokubiza iindleko. Nje ukuba ufumane eyona ilungileyo, qiniseka ukuba unamathela kuyo ixesha elide lokubambisa ukuze ufumane inani eliphezulu labalandeli. Ndikunye nabalandeli, kuhlala kunjalo ibali elifanayo, 'Okungakumbi, kubhetele.'
Abalandeli be-Instagram abaSebenzisa izixhobo zokuHacker
Ukuba ungowasemzini kubavelisi be-Instagram, nantsi into ekufuneka uyifunde. Ungazijonga njengesixhobo sokukhapha, esenziwe ngeekhowudi zokugqibela zokukopela. Ezi zilungileyo zifakwe apha, ukuze i-akhawunti yakho ye-Instagram ikhuseleke. Ngokusisiseko, izixhobo ziya kuhamba kwizithuba ze-Instagram ukukunika abalandeli basimahla, ngelixa i-akhawunti yakho ikhuselekile. Ezi ndawo zihlala zihlawulwa ngabaxhasi bazo. Ke ngoko, akufuneki ukuba bakhathaze ngemali okanye nantoni na eyenye. Ke, uya kukwazi ukufikelela kwinani elifunekayo labalandeli ngaphandle kokuphosa ingalo kunye nomlenze. Elona candelo lilungileyo kukuba uya kufumana abalandeli bokwenyani, abaya kuthi bazibonakalise beluncedo kakhulu phantsi kwendlela. Ke, akuyomfuneko ukuba ulahle imali yakho efunyenwe nzima kubaboneleli beenkonzo ze-Instagram. I khulula Abalandeli be-Instagram akukho vavanyo iiJenreyitha zinokuba yimpendulo yemibuzo yakho yabalandeli be-Instagram yasimahla.
Abalandeli be-Instagram basimahla bangenakwenza njani uphando kwi-Generator?
Ewe, indlela yokusebenza ye Abalandeli be-Instagram basimahla abakho kuvavanyo iJenreyitha ayisiyo inzululwazi ye-rocket nangayiphi na indlela. Kulula ukuyisebenzisa kwaye uzuze abalandeli ngesixhobo esinyanisiweyo se-Instagram esivelweyo kwicala lakho. Njengelizwi lesilumkiso, sinqwenela ukuphinda-phinda ukuba ungabelani ngamagama akho okugqithisa okanye ulwazi lwakho lomntu usebenzisa ijenali. Ukuba ucelwe ukuba ungene kwi-Instagram ukuze usebenzise isixhobo, kuya kufuneka ngoko nangoko iphakamise iflegi ebomvu engqondweni yakho. Ngethemba, uya kulithathela ingqalelo eli cebiso. Ukubuya kwakhona ekusebenziseni i-Instagram generator, nantsi indlela uninzi lwabo olusebenza ngayo. Nje ukuba utyelele isiza / isixhobo somatshini we-Instagram, uya kucelwa ukuba ufake igama lomsebenzisi okanye ikhonkco kwiprofayile yakho. Ngokukhetha, unokucelwa ukuba ukhethe isixhobo osisebenzisayo. Emva koko, kuya kufuneka ukhethe indawo kunye nenani labalandeli elifunwa nguwe. Nje ukuba ugcwalise ulwazi olusisiseko, ungaphumla kwaye ukonwabele iipopcorns zakho ngelixa isixhobo siza kusebenza. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ugcine iakhawunti yakho 'esidlangalaleni' kuba umvelisi ngeke akwazi ukuhambisa abalandeli kwiiprofayili zabucala.
Umvuzo wokufumana kwi-Instagram Abalandeli be-Generator be-Hack
Yonke inkqubo ayizukuthatha ngaphezulu kwemizuzu embalwa yexesha lakho. Ke, kutheni ungasebenzisi ithuba lokuvelisa i-Instagram simahla? Logama nje usebenzisa isixhobo sokwenyani kulo msebenzi, awuzukufumana nto ungaphulukana nayo, kodwa kuninzi oza kukufumana. Uyakholelwa okanye hayi, akuyi kufuneka ukhuphele nantoni na okanye ujongane nophando olungafunekiyo oluphosileyo ebusweni bakho. Oko bekutshiwo, ezinye iisayithi ziya kukucela ukuba ugcwalise uphando ukufikelela kwesi sixhobo. Kodwa, akufuneki kuthathe ngaphezulu kwemizuzu embalwa ukugqiba uphando. Logama nje kuvavanyo kungathathi iminyaka-elula ukuyigqiba okanye kubandakanya ulwazi lwakho lwezezimali, kuya kuba kuhle ukuba uye. Uphando luba bububi obuyimfuneko ngenxa yeendawo ezinqongophele abaxhasi. Ke, uphando lwakho luya kugcina iimitha zalo zemali zinyukile kwaye zigijime ukuze zikhathale iindleko ezichaphazelekayo ekudalweni nasekugcinweni kwendawo. Eyona nto iphambili kukuba kufuneka ulumke ungahambi kude kwiijenreyitha zesikram ngokungabelani ngolwazi lwakho lwezemali nangokwamkela ii-generator zokwenyani ezingayi kukuhlawulela iindleko. Ngale ndlela, uya kufumana ibhola ye-Instagram iqengqeleka endaweni yakho.
Iingcebiso zabalandeli be-Instagram:
Sibuyisa amazwi ethu. Ngamanye amaxesha, kuya kufuneka ukuba umamele ingcebiso katitshala wakho wakudala. Ewe, kufuneka uthumele umxholo ngokungaguqukiyo ukugcina abasebenzisi bakho abanje benomdla kwiprofayile yakho kunye nokutsala abantu abatsha. Kuyabonakala ukuba kucacisiwe ukuba iiprofayili ezisebenzayo ziqhele ukufumana abalandeli abaninzi kunezinto ezingasebenziyo. Kwakhona, iprofayile yakho idla ngokufumana utyelelo olungakumbi ukuba uthumela iifoto okanye iividiyo ngokungaguqukiyo. Ke, kuyahlawula ukwandisa imvamisa yakho yeposi. Ngugqirha ofanelekileyo ukuqhubeka nokufumana abalandeli bendalo. Ungayilibali into yokuba kuyanceda ukugcina iiposti zakho ezifanelekileyo kwi-niche ekhethiweyo kwiprofayili.
Ukuba uchithe naliphi na ixesha kwiwebhu, unokuba sele uyazi malunga ne-hashtags. Umdibaniso ogqibeleleyo wee-hashtag unokuba ngumqhekezi. Ngamanye amagama, unokufumana iposti yakho iqapheleke ngamashumi nangamawaka abantu ngokusebenzisa ii-hashtag ezifanelekileyo kwiposi yakho. Emva kwayo yonke loo nto, i-Instagram inika ingqalelo enkulu kwii-hashtag. Kulabo abangaziyo, i-Instagram ivumela ii-hashtag ezingama-30 kuyo yonke iposi. Ukubheja kwakho okuhle kwe-hashtag efanelekileyo kuya kuba kukujonga izithuba ezifanayo njengendlela yokufumana ii-hashtag ezifanelekileyo kwiifoto zakho. Uqinisekile ngokufumana impendulo ephezulu yokuzibandakanya ngokulandela ezi Abalandeli be-Instagram hashi.
Enye ingcebiso epholileyo apha iya kuba kukwenza i-vibe entsha kunye nabalandeli bakho ngokwabelana nabo iividiyo ngamanye amaxesha, ukuba awuyithumeli nayiphi na. Uninzi lwabasebenzisi be-Instagram banamathela kwiifoto. Ukubaleka kude nesihlwele kwaye ukongeza izinto eziguquguqukayo kunye nokutsha kweakhawunti yakho, kuyanceda ukuzama iividiyo. Iya kudala amava amnandi kunye nawokwenene kubaxumi / abalandeli bakho. Owu, siphantse salibala! Uyakholelwa okanye ungayikholelwa, iividiyo ze-Instagram zivame ukufumana izimvo ezininzi kunemifanekiso. Ke, kufanelekile ukuba kudutyulwe.
Ewe, kuninzi koku Abalandeli be-Instagram hashi. Nantsi enye ingcebiso epholileyo enokuthi ihlambe ngokwenene amaphupha akho e-Instagram. Sebenzisa amandla enyuko ukuze uzuze abalandeli bakaMahala kunye nabangasikelwanga mda ngexesha elincinci. Umzekelo, wabelane ngeefoto zakho ze-Instagram kunye neevidiyo kwezinye iinethiwekhi zenethiwekhi ezinje nge-Facebook, i-Twitter, njl. Umntu ongazi ukuba uku-Instagram uya kukuluma kakhulu kwaye aqale ukulandela kwi-Instagram ngokunjalo. Unokuthatha kwakhona uncedo kumhlobo wakho odumileyo we-Instagram ukuwela ukuphucula umxholo ngamnye. Ukuba umhlobo wakho uthandwa kakhulu, ubanjiwe uza kufumana isabelo sengonyama yezibonelelo ngokunyusa umnqamlezo. Abasebenzisi be-Instagram abanabalandeli abakhulu kakhulu luhlobo olugqibeleleyo lwabantu lokuphakanyiswa komnqamlezo.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho; ihlawula ukuhlala phantsi kwe-radar ye-IG ngexesha lokulandela kwakho Abalandeli be-Instagram hashi. Musa ukunika abasebenzi babo naziphi na izizathu zokujonga amanyathelo akho. Umzekelo, ungazami ukufikelela kwisigidi sabalandeli kungaphelanga inyanga okanye ezimbini ukuqinisekisa ukuba i-Instagram ayiboni imisebenzi yakho njengogaxekile. Kwakhona, akuba uyila iakhawunti yakho, musa ukuya kwindlela enkulu elandela abantu abaninzi. Vumela ukukhula kweakhawunti kujongwe njengendalo. Kwangokunjalo, thatha umendo ocothayo kwaye ungeze abalandeli ngokuthe ngcembe usebenzisa i-free generator ye-Instagram phaya. Ukuba uzama ukongeza inani elikhulu labalandeli kungaphelanga usuku okanye ezimbini, lungela isenzo esithile se-Instagram. Ewe, umema umngcipheko wokuba i-akhawunti yakho ivinjwe. Ke, lumka kwaye uphephe ukuhlala kwihlabathi leendaba zentlalo ixesha elide.
Kwanele! Siyakholelwa ukuba yayingumlomo. Ke, siyawuyeka lo msebenzi Abalandeli be-Instagram hashi, kwaye ndinethemba lokwenyani lokuba uya kufumana itoni yabalandeli be-Instagram yasimahla ngokulandela isilingo sethu kunye novavanyo Abalandeli be-Instagram basimahla akukho phando izisombululo. Ewe, asizami nzima ukwenza izinto zetoycoat apha. Ukuba ngokonqulo ulandela yonke ingcebiso enikelwe ngasentla, kuya kufuneka uzuze amawaka abalandeli abakhululekileyo kungabikho xesha. Ke, yiba uthandwa ngokusebenzisa i-freezer generator ye-Instagram kunye neengcebiso ezihamba kunye namaqhinga. Ngokuqinisekileyo uya kuba wenza kakuhle kwihlabathi le-Instagram, elinde yonke kunye nonke ngezandla ezivulekileyo.
Chwetheza igama lakho
Chwetheza i-imeyile yakho
Chwetheza uluvo lwakho